काठमाडौं नेचुरोपेथी अस्पतालमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । अत्याधुनिक सेवा–सुविधासहित स्थापित काठमाडौँ नेचुरोपेथी अस्पतालले बिरामीहरुलाई २० प्रतिशत छुट दिएको छ । कात्तिक १ गतेबाट संचालनमा आएको यस अस्पतालले सम्पूर्ण सेवामा एक महिनाका लागि सेवाग्राहीहरुलाई २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था...
काठमाडाैं । साइड इफेक्ट सबै औषधिको हुन्छ । सिटामोल पनि धेरै खायो भने कलेजो, मृगौला खराब गर्छ । खानेकुराहरूको पनि आफ्नै किसिमको साइड इफेक्ट हुन्छ । चिनी, गुलियो धेरै खाएमा मोटोपना बढ्छ । नून...
काठमाडाैं । आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसैले छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टिबायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने...
काठमाडौं । उपभोक्ताहरूलाई छाला गोरो बनाउने क्रिमहरूले रङ्ग मेट्ने वस्तु जस्तै काम गर्ने भन्दै प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ। ब्रिटेनको स्थानीय सरकारको सङ्घले हालै विभिन्न ठाउँमा छापा मारेपछि प्राप्त जानकारीका आधारमा त्यस्ता उत्पादनहरू “कुनै...
सोयाविन खानेको स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा
काठमाडौं, ४ असोज । सोयाविन एउटा यस्तो शाकाहारी भोजन हो जसमा मांसहारमाभन्दा पनि धेरै प्रोटीन र पोषक तत्व पाइन्छ । यसको प्रयोग विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ । सोयाबिन खानाले तपाई सुन्दर समेत देखिनुहुनेछ ।...
कसरी बच्ने डेंगुको संक्रमणबाट ?
काठमाडौं, २० भदौ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा डेंगु रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ । सिन्धुपाल्चोक घर भएका एक जनाको बुधबार ज्यान समेत गएको छ । कृषिमन्त्रीलाई डेंगुका संक्रमण भएपछि आईसीयुमा उपचार भइरहेको...
काठमाडौं, १९ भदौ । माछामासुरहित आहार गर्दा मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने भए पनि मस्तिष्काघातको जोखिम बढ्ने एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८...
याेनीबाट सेताेपानी आउने समस्या
काठमाडाैं । तपाईलाई सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? उमेर पुगेका यूवतीहरूमा कहिलेकाहि यौनांगबाट सेतो पानी आउनु सामान्य नै हो । तर नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा अझ शहरमा पनि लाज, धक, डर र संकोच मानेर...
काठमाडाैं । कुकुर वा बाँदरले टोक्यो भने रेबिजको कीटाणु उनीहरूको र्‍यालबाट सर्छ। नसाबाट शरीरमा रेबिजका भाइरस पस्छन् । एकदमै मन्द गतिमा सर्छ। तर, दिमागमा पुगेपछि बिरामीको मृत्यु हुन्छ। खुट्टामा टोकेको हो भने त्यो सरेर...
-एसपी उप्रेती सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै पटक पातलो किसिमको दिसा लाग्नु, पेट दुख्नु, खाना मन नलाग्नु, हल्का ज्वरो आउनु आदि झाडापखालाको लक्षण हो । यो रोग रेटो्र भाइरसको प्रजाति एस्कारिकिया कोली नामक किटाणुको संक्रमण...
एनसेलबाट अब ४० पैसा प्रति एमबी सम्ममा डेटा पाइने